Xaqiiqooyin u gaar ah filimka shactirada badan Judwaa ee Salman labada door ku matalay – Filimside.net
Xaqiiqooyin u gaar ah filimka shactirada badan Judwaa ee Salman labada door ku matalay
February 7, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 7, 2018
Judwaa waa mid ka mid ah aflaantii ugu caansanaa oo ay Bollywood-ka sameeyeen 90-maadkii waxaana filimkaan magac iyo maamuus ku helay Mega Star Salman Khan.
Judwaa oo maanta oo kale la daawaday 7 Feb 1997 wuxuu noqday Hit weyn sidoo kalena waa filim Classic ah oo heeso hirgaleen iyo shactiro dhameestiran leh Action-na u dheer yahay.
Fadlan hoos kaga bogo xaqiiqooyinka filimka Judwaa laga diiwaan galiyay oo aan isku aruurinay:
Xaqiiqada 1-aad: Judwaa waa filimkii ugu horeeyay oo ay Salman Khan iyo Director David Dhawan wada sameeyeen kadibna waxay noqdeen labo guusha u saaxiib ah.
Xaqiiqada 2-aad: Judwaa waa filimka ugu horeeyay ee Salman Khan labo door ku matalay oo aad loo jeclaaday.
Xaqiiqada 3-aad: Atirishada Rambha waxaa ku adkaatay codeynta filimkaan waxaana u codeesay atirishada Tabu.
Xaqiiqada 4-aad: Mamta Kulkarni ayaa loo soo bandhigay inay filimkaan wax ka jisho balse markii dambe Rambha ayaa lagu badalay.
Xaqiiqada 5-aad: Filimkaan markii kowaad ee lagu dhawaaqay wuxuu watay magaca Janambhoomi, balse Director David Dhawan wuxuu u arkay magac xiiso leh Judwaa (Mataanayaasha) sidaas ayuuna ku doortay.
Xaqiiqada 6-aad: Filimka Judwaa sheeko ahaan waxaa laga soo min guuriyay filimka Telugu ahaa Hello Brother (1994) ee uu Nagarjuna sameeyay si la mid ah sheekadiis qaybo ka mid ah filimka Twin Dragons (1992) ee Jackie Chan jilay ayaa laga soo qaatay.
Xaqiiqada 7-aad: Judwaa dib ayaa loo casriyeey ayadoo wax yar sheekada filimkaan laga badalay waxaa dib u sameeyay Varun Dhawan magacana loo bixiyay waa Judwaa 2 oo sanadii hore la daawaday kaasi oo Super Hit noqday isla David Dhawan ayaa Director ka ahaa.
Xaqiiqada 8-aad: Judwaa (1997) iyo Judwaa (2017) kaliya hal jilaa ayaa labadan filim kasoo wada muuqday waana Anupam Kher, bal dib u daawo labadan filim markaas ayaan fahmeysaa kuwa doorarka dhameestiran ku wada leh.
Xaqiiqada 9-aad: Shakti Kapoor oo filimka Judwaa door wacan ku lahaa wiilkiisa Siddhanth Kapoor oo aad u yar ayaa filimkaan ku jiray.
Xaqiiqada 10-aad: Judwaa wuxuu ahaa Album-kiisa mid ka mid ah kuwii loogu iibsiga badnaa sanadii 1997, fadlan Album-ka filimkan oo 6-hees ka kooban hoos kaga bogo:
Waxaa Aqrisay 751
Asc Bahda filkm side iyo aqristayaasha
Suasha waxay tahay in aad i jilcisan meesha aan fahmi waayay
Xaqiiqada 8-aad: Judwaa (1997) iyo Judwaa (2017) kaliya hal jilaa ayaa labadan filim kasoo wada muuqday waana Varun Dhawan, bal dib u daawo labadan filim markaas ayaan fahmeysaa kuwa doorarka dhameestiran ku wada leh.
Side ayu varun dhawan iga soo wada muuqday judwaagi hore ee 20 sano kii cusbaa waaba gartee halkese kaso muuqday varun dhawan kii hore kahor aha bal ii fasir sxb mahadsanid
Anupam Kher ayan ka rabnay waana saxnay, mahad sanid sida noo tusisay qaladkii dhankeena ahaa.